Video+Sawiro:-Ra’isalwasaaraha fadaraalka iyo Gudiga abaaraha oo kulan wada qaatay – Idil News
Video+Sawiro:-Ra’isalwasaaraha fadaraalka iyo Gudiga abaaraha oo kulan wada qaatay
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan gaar ah la qaatay Guddiga Gurmadka Abaaraha, waxana ay si gaar ah uga wada hadleen wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee saameynta ballaaran ay ku yeesheen Abaaruhu.
“Dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxa maanta looga fadhiyaa in ay badbaadiyaan walaalahooda dibaateysan oo haddii aan wax lala gaarin gaajo u dhiman doona; Waxay noqon doontaa howsha Xukuumaddu maalmaha soo socda mid ku wajahan abaaraha oo kaliya”ayuu yiri R/Wasaare Xasan Khayre.
Ugu danbeyn, Wuxuu ugu baaqay Ganacsatada iyo cid walba oo dhaqaale haysta in gurmadka qeybtooda ay ka qaataan, isla markaana ay badbaadiyaan dadka u dhimanaya gaajada iyo haraadka. Isagoo dhinaca kale tilmaamay in wadajir loogu duceeyo dadka iyo dalka Soomaaliyeed in ALLE uu ka qaado colaada iyo abaaraha soo noq-noqday.
Be the first to comment on "Video+Sawiro:-Ra’isalwasaaraha fadaraalka iyo Gudiga abaaraha oo kulan wada qaatay"